MC Hammer 2.0 နှင့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ် Martech Zone
တနင်္လာနေ့, အောက်တိုဘာလ 26, 2009 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 10, 2016 Douglas Karr
မင်းရဲ့လူမှုရေးမီဒီယာကနေသူတို့ရဲ့အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းကိုပြန်လည်အားကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နာမည်ကြီးတစ်ယောက်ကိုမင်းသုတေသနလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ငါရဲ့ပထမဆုံးနမူနာကတော့ MC Hammer ပဲ။ လူတိုင်းက Behind the Music ကိုကြည့်ပြီး MC Hammer ရဲ့ပေါ်ထွက်လာတာ၊
MC Hammer သည်ထိရောက်စွာရှိသည် အသုံးချ လူမှုရေး သူ့ကိုယ်သူခေတ်သစ်ယဉ်ကျေးမှုသို့ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်။ သင်နားထောင်ရန်တွန့်ဆုတ်နေလျှင်…။ သူဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖော်ရွေ၊ အသိဉာဏ်ရှိပြီးနှိမ့်ချသူဖြစ်တယ်။
သူကသူသည် Dan Schawbel's ရှိ Social Media သို့သူပေါ်ပေါက်လာပုံကိုဖတ်ရှုနိုင်သည် ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်မဂ္ဂဇင်း.
ဒန်ကဒီစာအုပ်အတွက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးဖို့လည်းခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ငါအရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်၊ မင်းဒါကိုကြည့်ရတာတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်တယ်။ သင်မရောင်းသေးပါကကောက်ပါ ဒီလရဲ့နမူနာ။ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ရှိခြင်း၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်၏အွန်လိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်ကိုကျွန်ုပ်အလေးအနက်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုက်ညီမှုရှိစေရန်နှင့်လူမှုမီဒီယာနှင့်ဘလော့ဂ်များတွင်အပြုသဘောဆောင်သောလွှမ်းမိုးမှုရှိနေစေရန်ဖြစ်သည်။
သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်ကိုများစွာစဉ်းစားခြင်းမပြုခဲ့ပါကဤမိတ္တူကိုကောက်ယူပြီးကျွန်ုပ်၏ဆောင်းပါးသည်သင့်အားပထမခြေလှမ်းကိုလှမ်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ MC Hammer နှင့် Douglas Karr မလုံလောက်ပါ၊ သင်နှင့်လည်းလူတွေ့မေးမြန်းခန်းများကိုတွေ့လိမ့်မည် ကယ်ရီ Rhodesလုံခြုံရေး နယူးယောက်ဂျက်လေယာဉ်များ; ပက်ထရစ် Lencioni, NY Times သတင်းစာအရောင်းစာရေးဆရာ, အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏ကမောက်ကမဖြစ်မှု; Steve Rubel, SVP, Edelman ဒီဂျစ်တယ်; ဂျွန် Jantschဘလော့ဂါ ducttapemarketing.com; နှင့် Mitch Joelစာရေးဆရာ, Separation ၏ခြောက် Pixels.
Tags: dan schawbelဂျွန် Jantschကယ်ရီ Rhodesmc တူmitch joelPatrick lencioniပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်မဂ္ဂဇင်းSteve rubel
26:2009 pm တွင်အောက်တိုဘာ 7, 20
Mr. Karr ၏ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်